किन अलमलियो नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया ? « Janata Samachar
किन अलमलियो नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया ?
काठमाडौं । पार्टी पुरानै अवस्थामा फर्किएपनि पार्टीभित्र एकले अर्को समूहलाई स्वीकार नगर्दा सत्तारुढ एमालेभित्रको शक्तिसंघर्ष थप पेचिलो बन्दै गएको छ । जसका कारण संसद पुनस्र्थापना भएको यतिका दिन बित्दा पनि नयाँ सरकार गठनबारे दलहरु अझै अनिर्णित हुन पुगेका छन् ।
फागुन २३ गतेकोे सर्वोच्च अदालतको फैसलाले माओवादी र एमालेलाई साविककै अवस्थामा पर्याइदिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई हटाएर नयाँ सरकार बनाउने खेलमा राजनीतिक दलहरु सक्रिय भएका छन् । माओवादी केन्द्र र एमाले अलग अलग भएपछि माओवादी केन्द, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी नयाँ सरकार गठनको लागि दौडधुपमा छन् । तर अझै ३ दल कुनै ठोस निष्कर्षमा भने पुग्न सकेका छैनन् ।
माओवादी केन्द्रले ३ वर्ष अघि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र नयाँ सरकार बनाउने तयारीमा आन्तरिक छलफलमा जुटेको लामै समय भएपनि अहिलेसम्म ओली सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता भने लिइसकेको छैन । जसका कारण ३ नै दल अहिले एकले अर्कोलाई पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । सरकार गठनकै विषयमा सोमबार बस्ने भनिएको माओवादी, कांग्रेस र जसपाको बीचको वार्ता समेत हुन सकेन । दलहरुले आफ्ना पार्टीभित्र आन्तरिक छलफललाई जारी राखेपनि के कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारेमा भने अझै निर्णय गर्न सकेका छैनन् ।
उता प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफू अल्पमतमा पर्ने निश्चित भएसंगै आफ्नो सरकार टिकाउन जसपासँगको छलफललाई तीव्रता दिएका छन् । तर जसपाभित्र पनि ओलीलाई समर्थन गर्न हुने र नहुने भन्नेमा दुइधार देखिएपछि अर्को अन्योलता बढेको छ ।
जसपामा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र डा.बाबुराम भट्टराई समूह ओलीलाई कुनैपनि हालतमा समर्थन गर्न नहुने अडानमा छन् भने पुर्वराजपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो लगायतका नेताहरु आफूहरुका माग पूरा गर्न सहमत भए समर्थन गर्न सक्ने आशय व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पनि सरकारको नेतृत्व पाए मात्रै सरकारमा सहभागी हुन सक्ने संकेत गरेका छन् । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूहरु सरकारमा जान हतार नभएको तर समय र परिस्थिती आए पछि नहड्ने बताउँदै आएका छन् ।